စင်္ကာပူရောက် မြန်မာသူနာပြုများ: ကျွန်တော်တို့ နေ့တိုင်းစားနေကြတဲ့ အချိုမှုန့်ခေါ် အန္တရာယ်မှုန့်အကြောင်း
Home ကျန်းမာရေး ကျွန်တော်တို့ နေ့တိုင်းစားနေကြတဲ့ အချိုမှုန့်ခေါ် အန္တရာယ်မှုန့်အကြောင်း
Post under ကျန်းမာရေး at 11/26/2010 12:23:00 AM Posted by MYANMAR NURSES IN SINGAPORE
ဒီလို အန္တရာယ် ရှိတဲ့ ရေသန့်ဘူးတွေ အကြော်စုံတွေထဲကို ဘာလို့ ထည့်ကြော်ကြရတာလဲ ဆိုတော့ အဲလိုရေသန့်ဘူး ထည့်ကြော်ထားတဲ့ အကြော်ဟာ အထူးကြွပ်မွနေပြီး အဲလို ကြွပ်ရွစားကောင်းမှုကလဲ အရမ်းကို တာရှည်ခံတယ်လို့ အကြော်လုပ်ငန်းအကူ အမျိုးသမီးတစ်ဦးက ပြောပြခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဲဒီလို လုပ်ရပ်တွေကို အကြော်ဖိုတွေနဲ့ နှစ်ပြန်ကြော် လုပ်ငန်းအချို့က လုပ်ကိုင်နေတယ်လို့ အတည်မပြုနိုင်သေးတဲ့ သတင်းတွေအရ ကြားသိနေရတာ ကြာပါပြီ။ ဒါကြောင့် ဒီလို ၀ိသမလောဘနဲ့ စီးပွားရှာတဲ့ လုပ်ရပ်ကို လိုက်လံစစ်ဆေးပြီး အပြစ်ပေး တားဆီးနိုင်ဖို့ လိုအပ်လှသလို ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကို ဦးစားပေး စောင့်ရှောက်တဲ့ အစားအသောက်နဲ့ ဆေးဝါးဆိုင်ရာ ဥပဒေတွေ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ အခိုင်အမာ ရှိလာပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်။
Written by : ဒေါက်တာသီဟသစ် Last Updated at 2010-11-15 on 07:32:04 472 Hits
ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတကို မျှဝေခြင်သော စေတနာဖြင့်.....
REF: http://www.mmdailynews.com/viewnews.php?id=289 မှ ကူးယူဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
5 comments: on "ကျွန်တော်တို့ နေ့တိုင်းစားနေကြတဲ့ အချိုမှုန့်ခေါ် အန္တရာယ်မှုန့်အကြောင်း"
ကျွဲရိုင်းရဲ့ ဆိုးကျိုးတွေကိုလည်း တင်ပြပေးပါအုန်း။
ဖတ်ပြီးသားပါ ။ ပေါက်ပြောလို့ထပ်လာဖတ်ပါတယ။် ကြေတော့မကြေသေးဘူး။
အချိုမှုန့် အကြောင်း ရေးထားတာ ဖတ်ရပါတယ်။ ကြောက်စရာ ဆိုးကျိုးတွေ ရေးပြထားတာကိုလဲ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အမေရိကန်နဲ့ ဗြိတိန်မှာ Monosodium Glutamate ကို ban လုပ်တာ မတွေ့ရပါ။ ဒီဆောင်းပါးကို ဘယ်အကိုးအကား သုတေသနစာတမ်းတွေက နေယူရေးတယ်ဆိုတာ သိချင်ပါတယ်။ Tarasoff and Kelly (1993), Woessner et al. (1999), Geha et al. (2000)တွေမှာလဲ အထက်က ရေးထားသလို မတွေ့ရပါ။ ကျေးဇူးပြူပြီး ကိုးကားချက် (Reference) တွေ ဖော်ပြစေလိုပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ရင် ယုံကြည်ရခက်လို့ပါ။
ဒီပုံက England Supermarkets တွေမှာ ရောင်းတဲ့ Soup sachet ထဲမှာ Monosodium Glutamate (MSG) ပါတဲ့ အကြောင်း ဥပမာပါ။ MSG ပါတဲ့ တခြား foods တွေလဲ အများကြီးရပါတယ်။
Chinese restaurant syndrome ကတော့ တချို့လူတွေမှာ MSG စားပြီးရင် ဖြစ်တတ်တာပါ။ well known ပါ။ ဘယ်ဟာဖြစ်ဖြစ် လွန်လွန်ကျူးကျူးစားသုံးရင် မကောင်းပါ။ ဒါပေမဲ့ ဟင်းအချိုအရသာအတွက် MSG ကိုထည့်မလား Industrial dye တွေပါတဲ့ ပုဇွန်ခြောက်ကို ထောင်းထည့်မလား ဆိုတာစဉ်းစားစရာပါ။ ပုဇွန်ခြောက်က အဲလို Harmful chemicals တွေမပါရင်တော့ အဲဒါ ကိုရွေးရမှာပေါ့။
ခုလို ကျနော်တို့ရဲ့ ဘလော့ဂ်ကို လာရောက်လည်ပတ်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျနော်တို့အနေနှင့် လာရောက်လည်ပတ်သူအားလုံးကို ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတမျှဝေချင်သော စေတနာဖြင့် ဒေါက်တာသီဟသစ်ရဲ့ ပို့စ်ကို ကူယူဖော်ပြလိုက်တာပါ။ Steve Evergreen အနေနဲ့ ဒေါက်တာသီဟသစ်ကို ခုကဲသို့ comment ပေး မေးထားပြီးပြီဆိုတော့ သိခြင်တဲ့ ကိုးကားချက်ကို သူပြန်လည် ဖော်ပြပေးပါလိမ့်မယ်။
အရမ်းကောင်းပါတယ်။ လူတိုင်း တကယ်လည်း လိုက်နာမှတ်သားသင့်တာမို့ ပြန်လည်မျှဝေခွင့်ပြုပါ။